I-Rivaroxaban powder (366789-02-8) hplc =98% | Ukurhoxisa iR & D Reagents
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Rivaroxaban powder
SKU: 366789-02-8. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-Rivaroxaban powder (366789-02-8), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Rivaroxaban powder ividiyo
Rivaroxaban powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Rivaroxaban powder
I-molecular Formula: C19H18ClN3O5S
Isisindo somzimba: 435.88
umbala: Mhlophe ukuba ube ngumphunga ophuzi
Rivaroxaban Ukusetyenziswa kwePowder
I-Rivaroxaban powder yi-anticoagulant kunye neyokuqala echaphazelekayo ngomlomo Xa inhibitor. Ngokungafani ne-warfarin, ukubeka iliso rhoqo kwi-lab ye-INR ayimfuneko. Nangona kunjalo akukho-antidote ekhoyo xa kwenzeka igazi elikhulu. I-tablet ye-10 kuphela ingathathwa ngaphandle kokutya. I-15 mg kunye ne-20 mg tablet kufuneka ithathwe ngokutya.
Isiphumo esibi kakhulu siphuphuma igazi, kubandakanywa ukuphuma kwamanzi kwangaphakathi. I-Rivaroxaban powder ihambelana namazinga aphantsi ahlaselwayo kwaye abulalayo kunokuba i-warfarin kodwa inxulumene namazinga aphezulu okuphuma kumgudu wesisu. Okwangoku akukho datshi ye-Rivaroxaban powder (ngokungafani ne-warfarin, isenzo esingatshintshwa kunye ne-vitamin K okanye i-prothrombin complex concentrate), oku kuthetha ukuba ukuphuma kwegazi okunzima kunokuba nzima ukulawula.
Ngo-Oktobha i-2014, i-Portola Pharmaceuticals yagqiba uvavanyo lweSigaba se-I kunye no-II njenge-antiexote ye-Factor Xa inhibitors eneempembelelo ezimbalwa, kwaye yaqalisa izilingo zeSigaba III. I-Andexanet alfa ilindeleke ukuba ivunyiwe kwi-2016. Njengoko kwe-2017, isiqulatho asisayi kuvunywa yi-US Food and Drug Administration.
Njengoko kwe-2015, ukuvavanywa kwe-post-marketing kubonisa ukutywala kwesibindi, kwaye kukho iimfuno ezongezelelweyo ezifunekayo ukulinganisa umngcipheko. Isilwayo siyaphikiswa kubantu abanesifo esibalulekileyo sesibindi kunye nesifo sokuphela kwesigulo, apho kuye kwachithwa izilwanyana.
I-Rivaroxaban powder inesilumkiso esinobhokisi ukucacisa ukuba abantu abasebenzisa isibisi akufanele bayeke phambi kokuba bathethe nononophelo lwabo lwezempilo, ngenxa yokuba kunokunyusa umngcipheko wesifo.
Kwi-2015, i-Rivaroxaban ipowder ebalwe inani elona liphezulu leemeko ezinobungozi obukhulu phakathi kwezilwanyana eziqhelwe rhoqo kwi-FDA ye-Adverse Events Reporting System (AERS).
I-Rivaroxaba ekuqaleni ephuhliswe yi-Bayer., Iboniswe ukukhusela iziganeko ezixhamlayo ze-thromboembolic (VTE) kwizigulane eziye zafumana iingubo ezipheleleyo kunye nokuguqulwa kwamadolo onke; ukuthintela ukushayiswa kwesisu kunye nokugqithiswa kweenkqubo kwizigulane ezingenayo i-fibrification ye-anti-ravular; unyango lwe-vein thrombosis (DVT) kunye ne-pulmonary embolism (PE); ukunciphisa umngcipheko we-DVT kunye / okanye i-PE. Ngenxa yokungabikho kwezifundo zokhuseleko, akukhuthazwa ukuba kusetyenziswe kulabo bangaphantsi kweminyaka eyi-18. Ukusetyenziswa kwayo akukhuthazelwanga kulabo abanesifo esibi kakhulu (<30mL / min).
I-Rivaroxaban powder yi-anticoagulant kunye neyokuqala echaphazelekayo ngomlomo Xa inhibitor. Ngokungafani ne-warfarin, ukubeka iliso rhoqo kwi-lab ye-INR ayimfuneko. Nangona kunjalo akukho-antidote ekhoyo xa kwenzeka igazi elikhulu. I-tablet ye-10 kuphela ingathathwa ngaphandle kokutya. I-15 mg kunye ne-20 mg tablet kufuneka ithathwe ngokutya. I-FDA ivunyiwe ngoJulayi 1, 2011.
Isilumkiso kwi-Rivaroxaba powder
Iimpembelelo eziqhelekileyo ezichazwe ngokuqhelekileyo ziphuma kumanzi, kubandakanywa ukuphuma kwamanzi kwangaphakathi xa unayo nayiphi na yale mpawu okanye abo babalwe kwisiqendu ESIBALULEKILEYO, biza ugqirha wakho ngokukhawuleza:
ukuphuma kwindoda enzima
ukuphuma kwizinsini zakho
ukukhwehlela okanye ukuhlanza igazi okanye izinto ezibonakala njengeendawo zekhofi
izitulo zamanzi, ezimnyama, okanye ezilindelekileyo
i-pink, okanye umchamo omdaka
utywala okanye utyhafile
intlungu engalo okanye emlenzeni
ukuphefumula okanye ukugwinya
intlungu okanye ukuvuvukala kwiindawo ezilinxeba
I-Rivaroxaban powder yi-anticoagulant yomlomo esandul 'ukutshalwa ngokutsha kunye ne-Factor ecacileyo Xa inhibitor esetyenziswe ekuthinteleni ukushaywa kwesibindi kunye nokugubha ngokugqithiseleyo kwizigulane ezinokuphefumula okungapheliyo, kunye nokuthintela nokukhusela izifo ezinzulu kunye ne-pulmonary embolism. I-Rivaroxaban powder iye yahlanganiswa nezinga eliphantsi le-enzyme ye-serum ngexesha lotyando kunye neziganeko ezinqabileyo zokulimala kwesibindi kunye nesifo se-jaundice.
i-varoxaban iboniswe ukukhusela iziganeko ze-thromboembolic ze-venous (VTE) kwizigulane eziye zafumana iingubo ezipheleleyo kunye nokuguqulwa kwamadolo onke; ukuthintela ukushayiswa kwesisu kunye nokugqithiswa kweenkqubo kwizigulane ezingenayo i-fibrification ye-anti-ravular; unyango lwe-vein thrombosis (DVT) kunye ne-pulmonary embolism (PE); ukunciphisa umngcipheko we-DVT kunye / okanye i-PE. Ngenxa yokungabikho kwezifundo zokhuseleko, akukhuthazwa ukuba kusetyenziswe kulabo bangaphantsi kweminyaka eyi-18. Ukusetyenziswa kwayo akukhuthazelwanga kulabo abanesifo esibi kakhulu (<30mL / min).
Rivaroxaban Powder Raw
Indlela yokuthenga i-Rivaroxaban powder evela kwi-AASraw
I-Rivaroxaban Recipes Powder Recipes:
Yintoni iDivaroxaban powder (Xarelto) Ukusetyenziswa?